Prague na-agbaji nzukọ ndekọ: MICE kachasị elu
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ » Prague na-agbaji nzukọ ndekọ: MICE kachasị elu
Na-agbasa News Travel • Akụkọ na -agbasa na Czechia • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • nzukọ • News • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Prague chịkọtara ọnụ ọgụgụ dị iche iche nke nzukọ na ọgbakọ omebe iwu na 2018. Ihe karịrị 4,500 ihe mere na mkpokọta ebe obibi ya n'afọ gara aga - nke ahụ karịrị otu ụzọ n'ụzọ atọ nke mmemme niile emere na Czech Republic. Obodo Czech nabatara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị nnọchiteanya 540,000 si n'akụkụ ụwa nile. N'otu oge ahụ, Prague nọrọ n'ọnọdụ nke itoolu na ọkwa mba ụwa nke ebe nzukọ ndị kachasị ewu ewu na afọ a.
Dị ka ụlọ ọrụ Czech Statistical Office (CZSO) si kwuo, nke ahụ na-edekọ naanị ndekọ nke nzukọ a na-enwe na ebe obibi ndị ọbịa na ndị bịara ihe karịrị mmadụ 50, nzukọ 4,534 na ọgbakọ na-eme na Prague na 2018. Nke ahụ bụ site na 2.2% karịa karịa afọ ndekọ nke 2016 na site na 3.3% karịa na 2017. N'otu oge ahụ, ọ bụkwa 36% nke ihe omume niile emere na Czech Republic.
Onu ogugu ndi nnochite anya adigide na 540,000 kemgbe 2013, ebe onu ogugu ndi no na nzuko na ada. Eziokwu ndị a na-egosi naanị usoro dị ogologo oge mgbe ndị na-ahazi na-ahọrọ ijide ihe omume maka ọnụ ọgụgụ pere mpe nke ndị sonyere. Onu ogugu ndi nzuko biara na Prague na 2018 bu 536,232 - site na 1.4% karịa nke afo gara aga.
Industrylọ ọrụ nzukọ Prague nwere ihe ịga nke ọma n'afọ gara aga ọ bụghị naanị na ọkwa mpaghara, kamakwa na ntụle mba. Na ICCA (International Congress na Convention Association) ọkwa zuru ụwa ọnụ, nke na-akwụ ụgwọ ebe aga-adabere na ọnụọgụ ọgbakọ na nzukọ ọgbakọ mere, Prague họọrọ itoolu. Ọ nọgidela n'ọnọdụ ya n'ime ụwa iri kachasị ewu ewu na nzukọ nzukọ, ebe ọ họọrọ asatọ na afọ gara aga. Banyere ogo mba, Czech Republic nọrọ n'ọnọdụ nke iri abụọ na isii.
Ndekọ ọnụ ọgụgụ nke ventionlọ Mgbakọ Prague dabere na data anakọtara site na isi isiokwu nke ụlọ ọrụ nzukọ Prague gụnyere ụlọ ọgbakọ omebe iwu, nke na-esonyeghị na ọnụ ọgụgụ CZSO, na-egosi na ọtụtụ ihe omume na-anabata ndị nnọchi anya 10 na 149 (74% nke ihe omume niile). Nzukọ isi na nzukọ ukwu 41 na ntinye aka karịa ndị nnọchi anya 1,000 mere na Prague afọ gara aga.
Ahịa ahịa kachasị dị na 2018 bụ United States, Great Britain, Germany, France na Switzerland. Ndị nnọchianya ahụ rutere isi obodo Czech iji lebara anya na isiokwu nke sayensị ọgwụ, agụmakwụkwọ, sayensị mmadụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ. Hotelslọ nzukọ ndị omeiwu nọgidere bụrụ ebe nzukọ nzukọ ndị ama ama (78% nke mmemme niile emere na Prague).
"Na-esote mmeghe nke ikike ikike ọhụrụ ọhụrụ n'afọ gara aga na afọ a, enwere ike ịtụ anya na-aga n'ihu na-aga n'ihu nke ọtụtụ ihe na afọ ndị na-abịanụ," ka Roman Muška, Onye Isi Nchịkwa nke guelọ Mgbakọ Prague na-ekwu, na-agbakwụnye, "Ọ bụ ezie na Czech Republic ugbua bụ otu n'ime mba 50 kachasị elu, nke na-ewepụta oke oriri zuru ụwa ọnụ na ngalaba nke nzukọ nzukọ, dị ka ebipụtara na Global Economic Significance of Business Events site na Events Industry Council na mmekota na Oxford Economics na November 2018. Dị ka akụkọ ahụ, ụlọ ọrụ nzukọ bụ otu n'ime akụkụ dị mkpa nke mba ụwa. Na 2017, ihe karịrị mmadụ ijeri 1.5 sitere na mba 180 sitere n'akụkụ ụwa niile sonyere na nzukọ azụmahịa dị iche iche. Ihe omume ndị a mepụtara oriri kpọmkwem na ọnụ ahịa nke ijeri USD 1.07 (nke otu ijeri dollar 1.3 na Czech Republic), na-akwado nde 10.3 nke ọnọdụ ọrụ (nke 12,000 na Czech Republic).
oge izu Britain ụlọ ọrụ mmemme azụmahịa nzukọ azụmahịa isi obodo isi obodo Ụlọ Ọrụ mmekota mkpokọta abịa nzukọ Congress ọgbakọ oriri mbono ụlọ ọrụ mgbakọ kansụl Czech Czech Republic data ọda ndị nnọchiteanya kpọmkwem aku akụnụba mmụta ụlọ ọrụ mmemme atụ anya ya eziokwu -esonụ France Germany akụ na ụba ụwa ọkwa zuru ụwa ọnụ Great Britain nwere usu ICC gụnyere mba nzuko Nzukọ mba ụwa na nzukọ ọgbakọ ọgbakọ ọrụ Key isi Ijikwa onye isi ahịa ọgwụ nzute nzukọ ụmụ oke kasị ewu ewu November ụlọ ọrụ Oxford Ọnọdụ akụ na ụba Oxford Ndị so na ya òkè mmadụ ewu ewu ọnọdụ Ọnọdụ Prague bipụtara họọrọ ogo udu ndekọ ndekọ afọ ndia nọgidere akụkọ mba Roman kwuru show dị ịrịba ama obere -elekọta mmadụ Source isi iyi ahịa na-ekwu, ọnụ ọgụgụ ihe ịga nke ọma akwado Switzerland okwu Mba United States n'elu 50 top iri mkpokọta -emekarị nde mmadụ United States USD uru ọpupu nabatara